WEB बाट सोधपुछ
विदेशी कामदारहरूको लागि मानसिक सहयोग नेकोरोबीलाई श्रम सहयोग
हामी दिनको २ hours घण्टा ईमेलबाट परामर्श स्वीकारिरहेका छौं!
के तपाईलाई यस्ता समस्या परेका त छैनन् ?
नेकोरोबी" मार्फत बहु-पक्षीय दृष्टिकोण बाट तपाईको कम्पनीलाई पूर्णरुपमा ब्याकअप गर्नेछौ !
१० बर्ष भन्दा माथिक ・विदेशी नागरिकलाई सहयोग गर्दैआएको व्यावहारिक ज्ञान
लामो समय देखी विदेशी नागरिक सहयोगको अनुभवलाई उपयोग गरी, रोजगारका समस्याहरु हल गर्नेछौ । फरक भाषा या संस्कृति जस्ता वाधा अवरोधमा नअल्झी ग्लोबल दृष्टिकोण बाट समस्याको हल गरिनेछ।
व्यक्तिगत परिस्थितिमा आधारित फरक फरक परामर्शव्यक्तिगत परिस्थितिमा आधारित फरक फरक परामर्श
हरेक ग्राहकवर्गको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी, आवश्यकता अनुसारको परामर्श सम्भव छ । व्यावहारिक ज्ञान र प्रविधिको सारका बारेमा पनि सल्लाह दिनेछौ।
अंग्रेजी भाषा बोल्न सक्ने क्लिनिकल मनोविज्ञान र श्रम एबं सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धिका प्रोफेसनलअंग्रेजी भाषा बोल्न सक्ने क्लिनिकल मनोविज्ञान र श्रम एबं सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धिका प्रोफेसनल
अंग्रेजी भाषा बोल्न सक्ने विज्ञहरु मार्फत विदेशी कामदारहरूको व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरिन्छ। सामाजिक बीमा र रोजगार सम्झौताको अलावा, मानसिक चिन्ता र समायोजन डिसअर्डरका बारेमा पनि परामर्श सेवा उपलब्ध छ।अंग्रेजी भाषा बोल्न सक्ने विज्ञहरु मार्फत विदेशी कामदारहरूको व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरिन्छ। सामाजिक बीमा र रोजगार सम्झौताको अलावा, मानसिक चिन्ता र समायोजन डिसअर्डरका बारेमा पनि परामर्श सेवा उपलब्ध छ।
नेकोरोबी मार्फत अंग्रेजीमा दक्ष भएका व्यावसायिक श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा अधिवक्ता एबं क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक प्रोफेसनल बाट सल्लाह लिन सकिन्छ।नेकोरोबी मार्फत अंग्रेजीमा दक्ष भएका व्यावसायिक श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा अधिवक्ता एबं क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक प्रोफेसनल बाट सल्लाह लिन सकिन्छ।
साईतामा प्रिफेक्चरको कावागोय सिटिमा जन्म
सं १९९३, अमेरिका स्थित टेम्पल विश्वविधालय जापानी स्कूल बाट स्नातक (राजनतिक शास्त्र, इतिहास )
सं १९९३, चिहोऊ न्युजपेपर कम्पनीमा काम शुरु
सं २००६, श्रम सुरक्षा तथा स्वास्थ्य अनुसन्धान संस्थान (स्वतन्त्र), अंग्रेजी भाषा अनुवादक
सं २००९, टोकियो स्थित क्लिनिकको स्थापना संगै, क्लिनिकल मनोवैज्ञानिकका रुपमा, टोकियो महानगर, मिनातो वार्डमा परामर्श तथा मानसिक अवस्था सम्बन्धी लेक्चर दिन शुरु।
हाल, सामाजिक बीमा तथा श्रम परामर्शदाता, क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक, भाषा अनुवादक गाईडका रूपमा श्रम सल्लाह तथा ब्यवसायिक कन्सल्ट्यांटको भूमिका। यसैगरी, वक्ता, समसामयिक विषयमा लेख पनि विस्तार गर्दै।
・क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक (दर्ता नं : २२९००)
・सामाजिक बीमा तथा श्रम परामर्शदाता (दर्ता नं: १३१७०३८९)
・विशेष सामाजिक बीमा तथा श्रम परामर्शदाता २०१९ मार्च मा जाँच उत्तीर्ण
・इंटरप्रिटर गाइड (अंग्रेजी) (दर्ता नं: EN ०२६२३)
・व्यावहारिक अंग्रेजी भाषा परीक्षण, प्रथम स्तर
・क्यारियर परामर्शदाता (दर्ता नं : १६२१५३३७)
・प्रमाणित मनोवैज्ञानिक खुला जाँच उत्तीर्ण (२०१८ नोभेम्बर )
श्रम र सामाजिक सुरक्षा अधिवक्ता田畑圭一
कानागावा प्रिफेक्चरको योकोहामा सिटि मा जन्म
सं २००३, कानागावा विश्वविधालय बाट स्नातक
सं २०१२, प्रशासनिक लेखक (ग्योसेइस्योसी) अनुमति प्राप्त
सं २०१७, सामाजिक बीमा तथा श्रम परामर्शदाता अनुमति प्राप्त
हाल योकोहामामा कार्यालय स्थापना गरी, श्रम परामर्श लगायत पेन्सन परामर्श जस्ता काममा सक्रिय
＜अनिश्चितता बाट आशा, त्यसपछि उज्यालो भविष्य तर्फ＞
कुनै गर्मी मौसम को दिन, ईबारागी प्रिफेक्चरको उशिकु सिटी पूर्वी जापान मा अवस्थित अध्यागमन कार्यालयमा (त्यसबेला) अफ्रिका बाट आउनुभएका युवा सँग कुराकानी गर्दै थिए।परदेश को ठाउँ, त्यसमाथी, यहाँबाट बाहिरको संसारमा निस्कने पाउने नपाउने कुनै निर्क्योल नभएको निराशपूर्ण अवस्था। त्यस्तो ठाउँ जहाँ, धेरैले मानसिक सन्तुलनको औषधी पनि लिने गरेका छन्। त्यहाँको सुबिधा लाई लिएर कैदीहरुले बेलाबेलामा भोक हड्ताल पनि हुने गरेको अवस्था।
त्यसो भएतापनि, ति युवाले पारदर्शी प्लास्टिकको पारीबाट चम्किला आँखा बनाउदै इशाराको भरमा आफ्नो देशको राजनीतिक अवस्था र अर्थतन्त्र का बारेमा बर्णन गरे।
केहि समय उनको कुरा सुनेपछि, मैले ति युवालाई भने।
「अनभिज्ञ भएकोमा माफ गर्नुहोला। तपाईको देशको बारेमा मलाई केहि पनि थाहा छैन। 」
मन्द मुस्कानका साथ उनले फेरी भने। 「सहि कुरा गर्नु भयो। हाम्रो देश भर्खर मात्र बन्दै छ। 」
जस्तोसुकै कठिनावस्था आइपरे पनि चाहना भए मानिसलाई बाच्ने श्रोत हुदोरहेछ, त्यो क्षण त्यस कुराको महसुस गरे।
हेइसेइ बर्ष को अन्त्य संग संगै, संसारले नै पहिलो पटक नोभेल कोरोना भाईरसको अनुभव गर्यो, र त्यसभित्र को जापान।
अस्तव्यस्त र अनिश्चित समय भएकालेनै जीवनका छनौट पनि धेरै बनाई, सक्रिय हुन सकिने सम्भावनाको सिर्जना गरी , मूल्य र मान्यतामा पनि विविधता अपनाऔ।
एक जना भए पनि धेरै व्यक्तिलाई आशा दिलाई, संगै विचार चिन्तन गरी, संगै रोएर अन्तमा खुशीयाली बाटौ।
हामीहरु सम्पूर्ण श्रमिकवर्गहरुको सुख दु:ख साट्ने एक प्रोफेसनल समुदाय हौ।
कुनै गर्मी मौसम को दिन, ईबारागी प्रिफेक्चरको उशिकु सिटी पूर्वी जापान मा अवस्थित अध्यागमन कार्यालयमा (त्यसबेला) अफ्रिका बाट आउनुभएका युवा सँग कुराकानी गर्दै थिए।
परदेश को ठाउँ, त्यसमाथी, यहाँबाट बाहिरको संसारमा निस्कने पाउने नपाउने कुनै निर्क्योल नभएको निराशपूर्ण अवस्था। त्यस्तो ठाउँ जहाँ, धेरैले मानसिक सन्तुलनको औषधी पनि लिने गरेका छन्। त्यहाँको सुबिधा लाई लिएर कैदीहरुले बेलाबेलामा भोक हड्ताल पनि हुने गरेको अवस्था।
हामी संग अनुभूति गर्न सकिने भविष्यका बारेमा सल्लाह गरेर हेर्नुहुन्छ की?
समर्थन गर्ने ग्राहकहरूको आवाज
परामर्श को सामग्री
एशियन मूलका कामदारहरु नियुक्त गर्ने सोच संगै, पहिलो अनुभब भएकाले निकै नै चिन्ता लागेको थियो।
विदेशी कामदार र हाम्रो कम्पनी बिचमा भाषा अनुवादकका रुपमा, कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई संस्कृति या संस्थाको भिजनका बारेमा पनि कुरा राख्न सक्यौ।
भावना उस्तै भए, काम गर्दै जादा व्यबस्थापन पनि मिलाउदै गएमा आउटपुट पनि सजिलै निक्लने हुँदा, अहिले जापानीज कामदारहरुलाई पनि एउटा हौसला बनेको छ।
२. टेक्निकल इंटर्न प्रशिक्ष्यार्थी ७ जनालाई काममा लिएका थियौ।पहिलो पटकको बिदेशी प्रशिक्ष्यार्थी को नियुक्ति, श्रम बीमा या सामाजिक बीमाका बारेमा अनभिज्ञ थियौ।व्यवस्थापन गर्ने संगठन संगको कम्युनिकेशनमा पनि निकै अप्ठ्यारो परेको थियो।२. टेक्निकल इंटर्न प्रशिक्ष्यार्थी ७ जनालाई काममा लिएका थियौ।पहिलो पटकको बिदेशी प्रशिक्ष्यार्थी को नियुक्ति, श्रम बीमा या सामाजिक बीमाका बारेमा अनभिज्ञ थियौ।व्यवस्थापन गर्ने संगठन संगको कम्युनिकेशनमा पनि निकै अप्ठ्यारो परेको थियो।
बिचार आदान प्रदानमा पनि निकै कठिनाई भैरहेको बेला, हाम्रो माग बमोजिमको सल्लाह, कार्यविधि प्रक्रिया मात्र नभई आपसी समझदारी को भिन्नता जस्ता समस्या पनि हल गर्न सम्भब भयो।
प्रशिक्षण अबधि पनि कुनै दुर्घटना या ठूलो समस्या बिना समाप्त भई, प्रशिक्ष्यार्थी पनि खुशी साथ फर्किए।
जापानी भाषा सिक्ने चाहना, भाषा सिक्नकै निमित्त क्यानडाबाट जापान प्रस्थान। जापानी भाषा कक्षा कोर्ष सकिएपनि यसपटक को नोभेल कोरोना भाईरसको कारणले गर्दा, आफ्नो देश फर्कन कठिन भयो।अध्ययन भिषा, त्यसमा पनि १२ महिना भन्दा अली माथिको मात्र छोटो बसाई।
चौतर्फी बाटो बन्द भएको अवस्था थियो, कस्तो किसिमको प्रक्रिया अपनाएमा सहयोग गर्न सकिने कुरा पनि केहि थाहा थिएन। सल्लाह गरेर हेर्दा विशेष उपायहरू र परामर्श गर्न सकिने काउन्टर पनि भएको जानकारी पाए।
यसका साथै, म यो बुझ्न सक्षम भए कि मेरो शैक्षिक पृष्ठभूमि "टेक्निकल / मानवीय ज्ञान / अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार" कार्यको लागि उपयोगी छ।
सदस्य लाभसबै अनलाइन प्रदान गरियो
मासिक सदस्यता शुल्क १०,००० येन (उपभोग कर बाहेक)
मासिक सदस्यता शुल्क २०,००० येन (उपभोग कर बाहेक)
हामी विदेशीहरूको रोजगारी सम्बन्धी परामर्श स्वीकार गर्दछौं। हामी ईमेल, फोन, वा अनलाइन बैठक मार्फत प्रतिक्रिया दिन सक्छौं।
90 ० मिनेट सम्म नि: शुल्क
१ 180० मिनेट सम्म नि: शुल्क
नियमित सेमिनार। यो मासिक सेमिनार हो।
हामी (१) मानसिक, (२) कानून, र ()) संचार सिद्धान्त महिनामा एक पटक प्रदान गर्नेछौं। सदस्यहरूले छनौट गर्न सक्दछन् र रूचिका शीर्षकहरू हेर्न सक्छन्। (माग गरेको साथ)
हामी "विशेष सेमिनारहरू" निम्तो दिने अतिथिहरू र "श्रृ semin्गार सेमिनारहरू प्रदान गर्दछौं जुन पेशेवरहरूले तुरून्त प्रयोग गर्न सक्दछन्" जुन सदस्य मूल्यमा पहिले नै धेरै लोकप्रिय भएको छ।
विशेषज्ञहरू (वकील, डाक्टरहरू, श्रम र सामाजिक सुरक्षा वकीलहरू, क्लिनिकल मनोवैज्ञानिकहरू, आदि) प्रस्तुत गर्दै
हामी तपाईंलाई विशेषज्ञहरू (वकिलहरू, डाक्टरहरू, श्रम र सामाजिक सुरक्षा वकीलहरू, क्लिनिकल मनोवैज्ञानिकहरू, इत्यादि) का परिचय दिन्छौं। पहिलो रेफरल साक्षात्कार 30० मिनेट सम्मको लागि निःशुल्क हो। (व्यक्तिगत भ्रमणको लागि कुराकानी योग्य)
साइन अप गर्न यहाँ ट्याप गर्नुहोस्
・・कामदारहरु बाट प्रत्यक्ष सल्लाह स्वीकार गर्नुहुन्छ?
कामदारहरु बाटको प्रत्यक्ष अनुरोध स्वीकार्य छैन।
के सम्झौता पत्र लेखन, नियम परिवर्तन, कामदार नियुक्ति आदि सम्बन्धि परामर्श लिन सकिन्छ?
हामी बिभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरु संग समन्वय गर्दै आएका छौ। होमपेजमा उल्लेखित सेवा बाहेक अरु सेवा पनि लिन सकिन्छ। कृपया हामीलाई सम्पर्क गरी हेर्नुहोस।
・・डाक्टर सिफारिस गराउन सक्नुहुन्छ ?
माग अनुसार, अंग्रेजी भाषा मा स्वास्थ्योपचार सेवा लिन सकिने डाक्टरको सिफारिस गर्न सकिन्छ।
・ग्रामीण भेगमा छु। के अनलाईन परामर्श लिन सम्भव छ?
अवश्य सम्भव छ। ग्राहकवर्गको बोझ घटाउनको निम्ति, AI (आर्टिफिसिएल ईन्टेलीजेन्स) को प्रयोग गर्ने संस्था या विशेषज्ञहरुसंग समन्वय गर्दै आएका छौ। संकोच नमानी सम्पर्क गर्नुहोला।
विदेशीहरु संग व्यवहार गर्ने तरिकाका सम्बन्धमा प्रशिक्षण लिने विचार छ। के सम्भव छ?
सम्पूर्ण भाषामा विदेशीहरु संग व्यवहार गर्ने तरिकाको तालिम दिईन्छ। पहिले सम्पर्क गर्नुहोला।सम्पूर्ण भाषामा विदेशीहरु संग व्यवहार गर्ने तरिकाको तालिम दिईन्छ। पहिले सम्पर्क गर्नुहोला।
अनलाइन घटना: विदेशी कामदारहरूको लागि मानसिक समर्थन - परिचय-
स्तम्भ १: के मूल्या ax्कन अक्ष परिवर्तन हुनेछ?
स्तम्भ २: "जो मानिस कसैको लागि केहि गर्न चाहान्छन्" धोका दिन्छन्
स्तम्भ:: तपाईसँग कति निर्भरताहरू छन्?
विदेशी कामदारहरूको लागि श्रम समर्थनको बारेमा जिज्ञासा र सोधपुछका लागि, कृपया तलबाट हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।